DAAWO: Filimka '' Street Street Trilogy 'ee' Netflix Trailer Street Trailer 'Oo Argagixiso Hor Iyo Xarunba Leh
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh DAAWO: Filimka '' Street Street Trilogy '' ee 'Trailer Street Trilogy' wuxuu dhigayaa Argagixiso hore iyo Xarun
Warar Naxdin LehFilimooyin naxdin lehNetflix (filim)Filimaanta DaabacaysaTrailer (filim)
Waxaan haysanaa wax kayar bil Netflix ee Wadada Cabsida Forbrydelsen markii ugu horeysay, iyo madal qulqulka ayaa hoos u dhigay sumad cusub oo cusub maanta si ay noo siiso aragti qoto dheer oo ku saabsan waxa argaggixisada cusub ee ay hayaan!
Seddexleyda filimada ayaa soo bixi doona midkiiba asbuucii laga bilaabo July 2, 2021 waana laqaban doonaa 1994, 1978, iyo 1666. Dulucda filimku wuxuu u dhigan yahay:
Sanadkii 1994, koox dhalinyaro ah ayaa ogaatay in dhacdooyinka argagaxa leh ee ku habsaday magaaladooda jiilal dhan ay isku xirmi karaan - iyo inay noqon karaan bartilmaameedka xiga. Iyada oo ku saleysan taxanaha cabsida iibinta ugu wanaagsan ee RL Stine, Cabirka Jidku wuxuu raacayaa qarowga iyada oo loo marayo taariikhda xun ee Shadyside.
The Wadada Cabsida buugaagtu waxay bilaabeen inay daabacaan 1989. Waxay ahayd talaabo caqli badan dhanka RL Stine, iyadoo lafilayo in dhagaystayaashiisu korayaan oo ay doonayaan buugaag iyaga la kortay. Saamiyada ayaa ka sareeyay buugaagtan, in kasta oo ay jireen dad yar oo ku dhintay Goosebumps buugaagta, waxa uu ku soo bandhigay Wadada Cabsida wuxuu ahaa mid aad u daran.
Tixraacyada ayaa laga iibiyay in ka badan 80 milyan oo nuqul adduunka oo dhan illaa maanta oo wali ah, qaar ka mid ah taageerayaasha naxdinta leh, albaabkooda nooca.
Muuqaalka cusubi waa mid aad u kacsan, soo bandhigaya sheeko ku boodaysa waqtiga oo leh natiijooyin cabsi leh. Hoos fiiri, oo noo sheeg haddii aad daawan doontid Wadada Cabsida markay ka soo muuqanayso Netflix bisha Julaay 9, 2021!
Wadada CabsidaCabsida Wadada CabsidaNetflixRL StineWaylon Jordan